Fanandramana "hiditra eo akaikin'ny toerana mampidi-doza" ny rosiana misy herinaratra mitsinkafona rosiana voasakana tao amin'ny Ranomasina Baltika
Home » Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra » Fanandramana "hiditra amin'ny toerana akaiky mampidi-doza" ny rosiana misahana ny angovo nokleary voahitsaka tao amin'ny Ranomasina Baltika
Fanandramana "hiditra amin'ny toerana akaiky mampidi-doza" ny rosiana misahana ny angovo nokleary voahitsaka tao amin'ny Ranomasina Baltika
Ny sambo mpiambina Rosiana miaraka amin'ny Guard Coast Coast Suède sy ny tafika an-dranomasina Danoa dia nanakana ny fiezahana hiditra amin'ny toerana mampidi-doza an'i Rosatom misy ny hery niokleary an-tsokosoko ataon'ny vondrona mahery fihetsika antinuclear akaikin'ny nosy Bornholm (Danemark). Ny Beluga-2, sambo misy mpikatroka antinuclear ao an-tsambo, dia teo amin'ny lalan'ny fifandonana niaraka tamin'ny zana-tsipiky ny sambo mitaingina ny hery niokleary Rosatom Akademik Lomonosov ho any Murmansk, tanàna Rosiana.
Lomonosov dia handeha ho any Chukotka any atsinanana atsinanan'i Rosia ankehitriny, ary rehefa ampifandraisina amin'ny tambajotra izy dia ho lasa fametrahana nokleary farany avaratra eto an-tany.
Akademik Lomonosov dia manasongadina reactors modular kely miaraka amin'ny rafitra fiarovana sy fiarovana azo antoka. Ny zavamaniry dia natsangana nifototra tamin'ny teknolojia efa voasedra sy andrana aman-jatony nandritra ny taona niasa azo antoka tamin'ny mpamaky ranomandry nokleary tany amin'ny Tendrontany Avaratra nandritra ny am-polony taona maro. Ny fametrahana dia antenaina hisolo ny tobin-kery nokleary Bilibino any Chukotka, ary koa ny toby famonoana arina taloha, hanomezana angovo madio, azo antoka ary azo antoka ho an'ny mponina Chukotka an'aliny.
Nilaza ny solontenan'i Rosatom:
"Midera ny maha-matihanina ny ekipa ny sambo mpiambina Coast Suède KBV314 sy HDMS Najaden an'ny tafika an-dranomasina Danemarka izahay sy ny mpiambina rehetra ary ny sampana fiarovana sy vonjy taitra.
“Miarahaba ny fifanakalozan-kevitra misokatra amin'ny mpikambana amin'ny vahoaka i Rosatom, ao anatin'izany ireo izay manohitra ny hery niokleary. Manaja ny zon'ny hetsi-panoherana ara-dalàna izahay ary mino fa zava-dehibe ny adihevitra misokatra momba ny angovo nokleary sy ny ho avin'ny Arktika.
“Mino mafy izahay fa ny olan'ny fiovan'ny toetr'andro sy ny hoavin'ny faritra Arktika dia mendrika ny fifampiresahana am-pahamarinana sy malalaka fa tsy ny fidirana am-pahibemaso sy tsy tompon'andraikitra.
“Ny fiarovana ny nokleary no laharam-pahamehana voalohany amin'i Rosatom ary miasa mafy izahay hiantohana ny faneken'ny besinimaro ireo tetikasanay sy ny fandraisan'anjaran'ireo mpiray antoka tanteraka. Ny ankamaroan'ny mpiaro ny tontolo iainana dia naneho ny fanohanany mafy ny tetikasa, izay hampihena ny fatran'ny CO2 sy ny gazy poizina hafa any amin'ny Arktika. ”
Ny governoran'i Chukotka Roman Kopin dia nilaza hoe:
“Ny toby famokarana angovo nokleary mitsingevana ao Pevek dia tsy hoe famelomana ilay tanàna kely fotsiny. Ny hoavin'ny Faritra Chukotka iray manontolo - ny toerana lavitra indrindra sy ny mangatsiaka indrindra amin'ny toetr'andro - ary amin'ireo mponina 50,000 XNUMX ao aminy dia miankina amin'ilay tetikasa. Io zavamaniry io dia ahafahana manome angovo azo antoka, azo antoka ary mora vidy ary hiantoka ny fampandrosoana maharitra ireo indostria manan-danja ao amin'ny faritra. ”
Seychelles dia miantoka ny fahitana azy hatrany amin'ny kaontinanta afrikanina amin'ny alàlan'ny fandraisana anjara faha-4 amin'ny WTM Africa
Nosy Aruba iray sambatra no mandray ny serivisy sidina vaovao avy amin'ny American Airlines